एप्पलले छवि मान्यता स्टार्टअप रिगेन्ड खरीद गर्दछ म म्याकबाट हुँ
यो जान्नु अचम्मको कुरा होइन कि एप्पलले सेक्टरमा नयाँ कम्पनी प्राप्त गर्यो। हरेक वर्ष ती धेरै पटक हुन्छन्। र यस पटक पालो छ एक सानो फ्रान्सेली स्टार्टअप रेगाइन्ड। यो सानो कम्पनी कृत्रिम बुद्धिको प्रयोगको माध्यमबाट फोटोग्राफहरूको विश्लेषण गर्न समर्पित छ।
खरीद एप्पल द्वारा आधिकारिक गरिएको छैन, तर TechCrunchपोर्टलले जानकारी खुलासा गरेको घोषणा गर्‍यो खरीद $ 500.000 को लागी प्रभावकारी बनाइएको छ (विनिमय दरमा करीव ,400.000००,००० युरो)। साथै, टेक्नोलोजी पोर्टलले कपर्टिनोमा भएकाहरूलाई सम्पर्क गरेको छ र केही शब्दहरूको जवाफ यस्तो छ: "एप्पल समय-समयमा साना टेक्नोलोजी कम्पनीहरू खरीद गर्दछ, र सामान्यतया हामी हाम्रो उद्देश्य वा योजनाहरूको बारेमा छलफल गर्दैनौं।"
अर्कोतर्फ, यो आन्दोलनले कम्पनीको आशय के हो जान्न पनि कार्य गर्दछ। र यस अवस्थामा हामी जान्दछौं कि फोटोग्राफी क्षेत्र एप्पलको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ; तपाईंले भर्खरका केही वर्षहरू र उनीहरूको उत्पादनहरू सुरूवात हेर्नुहोस्। यस बीच एप्पलसँग पहिल्यै तस्विर पहिचान टेक्नोलोजी छ र यसका फोटो अनुप्रयोगमा स्मार्ट खोजी छ, रेगेन्डको विकास एक कदम अगाडि जान्छ.
यो पनि ज्ञात छ कि गुगल उही क्षेत्र मा काम गरिरहेको छ; गुगल फोटो अनुप्रयोगहरूमा स्मार्ट खोजी गर्न यो पनि सम्भव छ। यद्यपि el सफ्टवेयर रेगेन्डबाट तपाई अझ बढि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, टेकक्रन्चका अनुसार यदि हामी बर्स्ट मोडमा शूट गर्छौं भने रेगेन्डको विकासले तपाईको उत्तम शटलाई छुट्याउन र यसलाई कभरमा देखाउनको लागि सक्षम छ। साथै, यो सम्भव हुने थियो स्वचालित रूपमा डुप्लिकेट फोटोहरू छोड्नुहोस् वा संकलन भिडियोहरू बनाउनुहोस्। अर्को शब्दमा, त्यहाँ अझ धेरै कुशल र व्यवस्थित अनुप्रयोग हुनेछ।
अर्कोतर्फ, सफ्टवेयर फ्रान्सेली स्टार्टअप को छ सेक्स, उमेर र मुडको बिच भिन्नता गर्न सक्षम। यसले घण्टी बजाउँदैन? ठ्याक्कै, अनुहार आईडी। अब, हामी जान्दैनौं कि यदि यो सफ्टवेयर को केहि आईओएस ११ को आगमन संग एकीकृत हुन सक्छ, के स्पष्ट छ के यो खरीद को लागी सुधार निकट भविष्यमा आउन बाँकी छ कि छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » एप्पलले रेगइन्ड खरीद गर्दछ, एक छवि मान्यता स्टार्टअप
MacOS उच्च सिएरा बीटा, HEVC, APFS फाईल प्रणाली र अधिक। म्याकबाट मा हप्ताको सर्वश्रेष्ठ